Bụ ọdịiche dị n'etiti ajọ ifufe na ebili mmiri | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ bụrụ na anyị ga-ekwupụta nke bụ ihe omume abụọ na-emebi emebi na nke na-emebi emebi nke dị na mbara ala, enweghị obi abụọ na ha bụ ajọ ifufe na ebili mmiri.
Nọmalị enwere ntakịrị ọgba aghara ma a bịa ịkọwa ọdịiche ha, ọ bụ ya mere m ga-eji kọwaa n'okpuru njirimara nke ọ bụla n'ime ha nke mere na site ugbu a gaa n’ihu ịmara nke bụ otu na nke bụ ọzọ.
1 Esemokwu dị n'etiti oke mmiri na ifufe
2 Gịnị bụ tonado?
3 Kedu otu egbe tonado?
4 Njirimara na nsonaazụ nke oke mmiri
5 Gịnị bụ ajọ ifufe?
6 Olee otu esi guzobe oke ifufe?
7 Njirimara na ajọ ifufe
8 Otu Ifufe
8.1 Nkeji 1
8.2 Nkeji 2
8.3 Nkeji 3
8.4 Nkeji 4
8.5 Nkeji 5
Esemokwu dị n'etiti oke mmiri na ifufe
Nnukwu nnukwu ọdịiche bụ ebe ebe ha malitere ka e kee ha. N'ihe banyere oké ifufe, ha na-etolite mgbe niile n’elu ala ma ọ bụ n’ógbè ndị dị n’ụsọ oké osimiri nke dị ezigbo nso ikpu ala. Kama nke ahụ, ajọ ifufe ga na-etolite mgbe niile n'oké osimiri ọ gaghị ekwe omume na a ga-eke ha n’elu ụwa. A ghaghị ịhụ ọdịiche ọzọ pụtara ìhè n'etiti ihe abụọ ahụ na ọsọ nke ikuku ha. Ọsọ ọsọ na oke ifufe dị oke karịa ifufe, na ifufe nwere ike ịbịaru ya n'oké nsogbu na 500 km / h. N'ihe banyere ifufe, ikuku ikuku anaghị adịkarị agafe ihe 250 km / h.
Na usoro nke nke, e nwekwara nnukwu iche ebe a nkịtị ma ọ bụ ọkara tonado-emekarị nwere dayameta nke banyere 400 0 500 mita. Otú ọ dị, ajọ ifufe na-ebuwanye ibu ebe ọ bụ na dayameta ha nwere ike iru kilomita 1500. N'ihe gbasara oge ndụ nke otu na nke ọzọ enwere nnukwu esemokwu. Tornadoes anaghị adịkarị mkpụmkpụ ma ndụ ha nwere ike ịdị obere nkeji. N’aka ozo, ndu hurricane toro ogologo oge karie izu ole n’iru. Dịka ihe atụ, enwere m ike ịkọwa Hurricane Nadine nke nọ n'ọrụ ọ dịghị ihe na-erughị ụbọchị 22, ma anyi nwekwara ajọ ifufe Irma nke kachasị ike na akụkọ ihe mere eme na Atlantic.
Ọdịiche ikpeazụ dị n'etiti ha abụọ na-ezo aka n'okwu amụma. Tonado bụ esiri ike ịkọ amụma karia banyere oke ifufe, nke di nfe ikwu uzo ya na ebe o guzobere.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere oke mmiri ozuzo ma ọ bụ oke ifufe, nọgidenụ na-agụ n’ihi na anyị ka nwere ọtụtụ ozi anyị ga-enye gị n’isiokwu a.
Gịnị bụ tonado?
A tonado bụ oke ikuku nke na-eme ọsọ ọsọ. Njedebe nke oke ikuku mmiri dị n'etiti elu nke ụwa na igwe ojii cumulonimbus. Ọ bụ ihe ikuku ikuku nke ikuku na nnukwu ume, ọ bụ ezie na ha na-ewe obere oge.
Kedu otu egbe tonado?
A na-amụkarị ifufe site na égbè eluigwe ma na-esokarị akụ mmiri igwe. Maka akwa mmiri na-etolite, ọnọdụ nke mgbanwe na ndu na ọsọ nke oke ifufe, na -emepụta ntụgharị ntụgharị na ntanetị. Mgbe mmetụta a mere, a na-emepụta cone vetikal nke ikuku na-ebili ma na-agbagharị n'ime oké ifufe ahụ.
Ihe omimi nke ihu igwe nke na-akwalite ọdịdị nke oké ifufe na-eme ihe karịa n'ehihie karịa n'abalị (karịsịa na mgbede) na oge nke oge opupu ihe ubi na udu nmiri. Nke a pụtara na oke mmiri ozuzo nwere ike ịmalite n'oge opupu ihe ubi na ọdịda ma n'ehihie, ya bụ, ha na-agakarị n'oge ndị a. Agbanyeghị, oke ikuku nwere ike ịda n'oge ọbụla n'ụbọchị yana n'ụbọchị ọbụla n'afọ.
Njirimara na nsonaazụ nke oke mmiri
A naghị ahụ oke ifufe ahụ anya naanị mgbe ọ na-eburu ụmụ irighiri mmiri sitere na mmiri ikuku mmiri na uzuzu na irighiri ihe dị na ala, ọ na-acha ntụ.
A na-ekekarị oke ifufe dị ka oke ifufe, ike, ma ọ bụ oke ifufe. Oke mmiri ozuzo na-eme ka naanị pasent abụọ nke oke mmiri ozuzo, mana kpatara ọnwụ 70 nke ọnwụ niile o nwekwara ike iwe otu awa ma ọ bụ karịa. N'ime mmebi nke oke ifufe kpatara:
Ndị mmadụ, ụgbọ ala na ụlọ niile a tụbara n'ikuku
Nnukwu mmerụ ahụ
Ọnwụ ndị na-ebute site n'ịkụ ihe mkpofu na-efe efe
Mmebi na ugbo
Homeslọ ndị e bibiri ebibi
Ndị na-amụ gbasara ihu igwe enweghị ebe ha na-ebu amụma banyere oke ifufe dị ka oke ifufe. Agbanyeghị, site na ịmara mgbanwe mgbanwe ihu igwe nke na-ekpebi nguzobe oke mmiri, ndị ọkachamara nwere ike ịdọ aka na ntị banyere ọnụnọ oke ifufe tupu ịchekwa ndụ. N'oge a oge ịdọ aka na ntị maka oke mmiri bụ 13 nkeji.
A pụkwara ịmata oke ifufe site na ụfọdụ ihe ịrịba ama sitere na mbara igwe dị ka ịtụgharị na mberede gbara ọchịchịrị ma na-acha akwụkwọ ndụ, nnukwu akụ́ mmiri igwe, na mbigbọ ike dị ka nke locomotive.
Ewere oke ifufe dika oke ikuku nke kasị sie ike ma na-eme ihe ike n’ụwa. Iji kpọọ ajọ ifufe, aha dị iche iche dị ka ajọ ifufe ma ọ bụ ajọ ifufe, dabere n ’ebe ha bidoro. Okwu sayensi bu okpomoku.
Naanị ajọ ifufe na-ekpo ọkụ nke na-efe n'akụkụ Oké Osimiri Atlantic na nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ Pacific na-akpọ oke ifufe.
Olee otu esi guzobe oke ifufe?
Ka ajọ ifufe mepụta, a ga-enwerịrị oke ikuku na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ (ikuku ikuku ebe okpomọkụ nwere njirimara ndị a). Igwe ikuku a na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ na-eji hurricane eme ihe dị ka mmanụ ụgbọala, ya mere ọ na-abụkarịkarị n'akụkụ Equator.
Ikuku na-esi n’elu mmiri agbapụta, na-ahapụ ebe kasị ala n’enweghị ikuku dị ala. Nke a na - emepụta mpaghara ikuku ikuku dị nso na oke osimiri, ebe enwere obere ikuku kwa otu olu.
Na mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ nke ikuku gburugburu ụwa, igwe ikuku na-esi ebe ikuku ọzọ na-aga ebe na-erughị ala, ya bụ, site na mpaghara ndị dị elu ma dị ala. Mgbe ikuku gburugburu ebe a hapụrụ na nsogbu dị ala na-akwali iji mejupụta "oghere" ahụ, ọ na-agbakwa ọkụ ma na-ebili. Ka ikuku na-ekpo ọkụ na-arị elu, ikuku gbara gburugburu na-agbagharị iji were ọnọdụ ya. Mgbe ikuku nke na-ebili jụrụ, ọ na-abụ igwe ojii. Ka usoro a na-apụta, igwe ojii na usoro ikuku niile na-agbagharị ma na-eto, na-eme ka ọkụ si n'oké osimiri na mmiri na-agbapụta n'elu.
Njirimara na ajọ ifufe
Dabere na ebe ugwu nke oke ifufe a, ọ ga-agbanye otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ. Ọ bụrụ na ọ na-etolite edere edere, hurricane ga-agbagharia na uzo ozo. Kama nke ahụ, ọ bụrụ na e guzobere ha ebe ndịda, ha ga na-agbagharị n’oge na-adịghị anya.
Mgbe ikuku na-aga n'ihu na-agbagharị mgbe niile, anya (nke a na-akpọ anya nke hurricane) na-etolite n'etiti etiti dị jụụ. Na anya nrụgide dị oke ala e nweghịkwa ifufe ma ọ bụ ụdị iyi ọ bụla.
Oké ifufe na-ebelata mgbe ha banyere n'ala, ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịga n'ihu na-eri nri ma na-eto eto na ike nke oké osimiri. Ọ bụ ezie na ajọ ifufe na-akwụsị ka ha na-erute ọdịda, ha siri ike iji mebie na ọnwụ.
O doro anya na ị nụtụla na "ajọ ifufe 5 nke Atiya." Gịnị Bụ Ajọ Ifufe? Ọ bụ ụzọ iji tụọ ike na ike mbibi nke oke ifufe. E kere ha uzo ise ma ha bu ndi a:
Ifufe n’agbata kilomita 118 na 153 kwa awa
Obere mmebi, ọkachasị osisi, ahịhịa, na ụlọ ndị na-agagharị agagharị ma ọ bụ trailers na-echezighị nke ọma.
Mbibi ma ọ bụ ele mmadụ anya n'ihu nke usoro ike ma ọ bụ ihe ịrịba ama arụnyere. Swells nke 1.32 ruo 1,65 mita karịa nkịtị.
Obere mmebi nke ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri.
Ifufe n’agbata kilomita 154 na 177 kwa awa
Nnukwu osisi na ahịhịa. Mmebi dị ukwuu nke ụlọ mkpanaka, ihe ịrịba ama, na ahịrị ike ndị egosipụtara.
Mbibi nke akụkụ nke ụlọ, ọnụ ụzọ na windo, mana obere mbibi nke ihe owuwu na ụlọ.
Swells nke 1.98 ruo 2,68 mita karịa nkịtị.
Idei mmiri jupụtara n'okporo ụzọ na okporo ụzọ ndị dị nso.
Nnukwu mmebi nke piers na piers. Marinas jupụtara na mmiri ma obere ụgbọ mmiri na-emebi moorings na mpaghara emeghe.
Acukpọpụ ndị bi na ala ndị dị n'ụsọ oké osimiri.
Ifufe n’agbata kilomita 178 na 209 kwa awa
Mmebi sara mbara: nnukwu osisi gbadara, yana ihe ịrịba ama na ihe ịrịba ama ndị edobereghị.
Mmebi nke elu ụlọ na ọnụ ụzọ na windo, yana akụkụ nke obere ụlọ. E bibiri ụlọ obibi na ụgbọ ịnyịnya.
Mmiri ozuzo nke 2,97 ruo 3,96 mita karịa nke nkịtị na idei mmiri na mpaghara dị ukwuu nke mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri, na mbibi dị ukwuu nke ụlọ ndị dị nso n'ụsọ oké osimiri.
Nnukwu ebili mmiri na irighiri ihe na-ese n'elu mmiri na-emebi nnukwu ụlọ ndị dị nso n'ụsọ oké osimiri.
Ala ndị dị larịị 1,65 mita ma ọ bụ ihe na-erughị elu ogo mmiri karịrị kilomita 13 n'ime ime obodo.
Kpọpụ ndị niile bi n'akụkụ ndị dị n'ụsọ oké osimiri.
Ifufe n’agbata kilomita 210 na 250 kwa awa
Oke mbibi: osisi na ahịhịa nke ifufe na-ebugharị, ihe ịrịba ama na ihe ịrịba ama na-adọka ma ọ bụ bibie.
Nnukwu mbibi nke elu ụlọ, ọnụ ụzọ na windo. Mkpokọta ụlọ na-ada kpamkpam na obere ụlọ.
Imirikiti ụlọ ndị na-agagharị agagharị na-ebibi ma ọ bụ mebie nke ukwuu. - Swells nke 4,29 ruo 5,94 mita karịa nkịtị.
Iju mmiri dị ala mita 3,30 ma ọ bụ ihe na-erughị elu karịa elu oké osimiri, idei mmiri ruru kilomita iri n’ime ime obodo.
Nkpochapụ nke ndị niile bi na mpaghara ihe dị ka 500 mita site n'ụsọ oké osimiri, nakwa na ala dị ala, ruo kilomita atọ n'ime obodo.
Ifufe karịrị kilomita 250 kwa awa
Mbibi na-akpata mbibi: a na-ebupụ osisi na osisi nke ifufe na-efopụ kpamkpam.
Nnukwu mmebi nke ụlọ nke ụlọ. Mgbasa ozi na ihe ịrịba ama na-adọka na blown pụọ.
Mkpokọta ida nke ụlọ na mgbidi nke obere obibi. Imirikiti ụlọ ndị na-agagharị agagharị na-ebibi ma ọ bụ mebie nke ukwuu.
Swells 4,29 ruo 5,94 mita karịa nkịtị.
Site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu ihe ọdịiche dị n'etiti oke ikuku na oke ifufe yana njirimara ya. N'ihi mgbanwe ihu igwe, ihe ịtụnanya ndị a ga-adịwanye njọ ma nwekwaa ike karịa, yabụ ọ bụ ihe amamihe ịdị na-eme nke ọma ịmara banyere ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ihe dị iche na etiti ifufe na ebili mmiri
Ezigbo nkọwa; ezigbo didactic
Nkọwa dị mfe ma kwere nghọta maka ndị dị ka m na-amaghị esemokwu ha
Daalụ maka ozi ahụ, ekwesịrị m ikweta na amaghị m ihe niile gbasara ya.
JUAN CARLOS AHT dijo
Morningtụtụ ọma, amaghị m ma ọ bụrụ na mmadụ ekwuola ya, mana echere m na ọ bụrụ na a tụba bọmbụ na anya oke ifufe ma ọ bụ oke mmiri nke na-eme ka agụụ nwee mgbawa, nke a ga-akwụsị ike nke iyi na iyi egwu nke a na-anọchite anya ya. .
Zaghachi JUAN CARLOS ORTIZ
Na nkọwa ọ na-ekwu na ajọ ifufe bụ ifufe kachasị ike mana oke ifufe na-eru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 500 km / h, ọ ga-ekwu na oke ifufe dị ike karịa ajọ ifufe
Zaghachi ANTONIO MIRANDA CRESPO
Ezigbo nkọwa, na mbido ị na-etinye okwu ahụ ´´te .piuedo. see okwu
hurricane´´ etc a na m agwa gị ihe kpatara ị jiri tinye piuedo.
Ma ezigbo nkọwa. jide ka iji
Zaghachi onye ọrụ Nazi